Iindaba - i-2020 CBE eShanghai booth number N4-H21
Ngo-2020, siya kwi-CBE efanelekileyo eShanghai ukususela ngoJulayi 8 ukuya ku-12.
Sibonisa iimveliso zethu eziphambili, ezinje ngomatshini ojikelezayo wokugcoba imilebe, tyhala uhlobo lomlomo wokugcoba umatshini wokugcwalisa umatshini, umatshini wokucinezela umgubo, umatshini wokubhaliweyo othe tyaba, i-packagings ye-cosmetic yelips gloss, i-lip balm, i-lipstick, i-mascara, i-eyeliner kunye necala elithile lesithunzi , ibhokisi ye-compact blush, iingqayi zepowder evulekileyo njalo njalo.
Kananjalo babuza imibuzo malunga nokuba ungayigcwalisa njani i-mascara ephezulu ye-viscous lip, njengeendlela zokuphepha i-bubble yomoya xa uzalisa, indlela yokuthintela ukuvuza, indlela yokuphepha ukonakalisa umonakalo ukwenza iminqwazi eyaphukileyo, indlela yokulungisa ivolumu yokugcwalisa, isantya sokugcwalisa, indlela yokuseta isantya sokufaka, ukufaka i-torque, ukucoca kunye nokuqinisekisa ukuba umatshini wokugcwalisa imilebe yomlomo ukugcwalisa imilo kunye nobungakanani beebhotile, nokuba umatshini wethu wokugcwalisa imilebe ungenziwa ngokufudumeza kunye nokudibanisa. Sivavanya umatshini wethu ngomlomo wokubonisa ubungakanani bokugcwalisa okuphezulu +/- 0.03g.
Kukho abathengi ukuba bathenge umatshini wokugcwalisa i-lip gloss kwindawo leyo kwaye bakhethe neetyhubhu zomlomo ezininzi zokumilisela uhlobo lwabo olutsha lwesimbo. Kwakhona kukho umthengi ofuna umatshini wokugcwalisa i-lip gloss kunye notshintsho olunenkcukacha, njengobude bomatshini wokugcwalisa uhlobo lokutyhala ukuqinisekisa indawo enkulu yokusebenza yomqhubi kunye nesantya esiphezulu sokugcwalisa. Bonke oomatshini bethu bokuthambisa bamkela izinto ezaziwayo zorhwebo ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuzinzileyo, iSwitsch yiSchneider, iRelays yiOmron, iServo motor yiPanasonic, i-PLC yiMitsubishi, izixhobo zomoya I-SMC, isikrini sokuchukumisa yiMitsubishi, isilawuli sokufudumeza: iAutonics
Wamkele abathengi abatsha kunye nabathengi abadala ukuba batyelele iwebhusayithi yethu ukufumana ulwazi oluhlaziyiweyo malunga noomatshini bethu bokuthambisa. Sisebenzisa oomatshini bethu bokuthambisa ngokusekwe kumatshini wethu oqhelekileyo nakwimfuno zabathengi ngalo lonke ixesha. Nawuphi na umbono ofuna ukuwufezekisa, wabelane nathi ngokukhululekileyo. Ndiyakholelwa ukuba siya kuba liqabane elifanelekileyo kwishishini kwaye sibe ngabahlobo abalungileyo.
Ukucoca ukusebenza komatshini wokugcwalisa:
Ukuqinisekisa ukubekwa emgangathweni kokucocwa kwezixhobo kunye nokubulala iintsholongwane kwinkqubo yemveliso, ukubonelela ngenkqubo yokusebenza yokucoceka kunye nokubulala iintsholongwane kubaqhubi, ukunqanda ungcoliseko lomzimba kunye neekhemikhali, ukwenzela ukulawula ungcoliseko lweentsholongwane kunye nokuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Qiniseka ukuba zonke izixhobo ezikwizixhobo ziyasuswa phambi kokuba zicocwe.
B. Isithambisi: Amanzi akhethiweyo, isepha yekati emhlophe, iipesenti ezingama-75 zotywala.
C. Izixhobo zokucoca: ibrashi, umpu womoya.
D. Ilaphu elimhlophe lomqhaphu lifakwe kwi-75% yotywala ukuze isetyenziswe.
E. Imveliso efanayo, amanani e-batch ahlukeneyo, ukucoca, iinxalenye zinokusetyenziswa ngaphandle kokuqhaqha.
F. Abaqhubi basebenza ngokwemiqathango yomsebenzi wokucoca kwaye baqinisekise ukuba inyathelo ngalinye lokusebenza liyahlangabezana neemfuno ezimiselweyo.
G. Umntu ophetheyo kwimveliso uya kuqinisekisa ukuba abaqhubi abaqeqeshiweyo kunye neengcali basebenza ngokuhambelana nokusebenza, bajonge kwaye bahlole imeko yokucoca, kwaye babhale kwangexesha kwaye basayine.
Ngaphambi kokucoca, onke amalungu kufuneka ahlukaniswe ngokupheleleyo ngefomula eyahlukeneyo kunye nenombolo yombala.
A. Ukuzaliswa kugqityiwe, kwaye iimveliso ezigqityiweyo zisuswe kwi-hopper kwaye kufuneka zicocwe.
B. Izixhobo zicociwe, kodwa kufuneka zicocwe kwakhona ukuba akukho mntu iveki yonke.
C. Ukuba ichazwe ngokukodwa ngabathengi kunye neemveliso, ukucoca kuya kwenziwa ngokwamaxwebhu akhethekileyo abathengi kunye neemveliso.